FAKAFAKA | NewsMada
Par Taratra sur 18/02/2020
Teny ka teny… Hatramin’izao mbola eny !
Volana febroary, voateniteny ny teny… Tenindreny, teny ibeazana, tenindrazana, sns! Izay ilazana azy, tsy maninona fa teny malagasy avokoa ny tian’ireo hambara. Teny am-bavan’ny Malagasy hatrany ny teny malagasy. Hatramin’izao, mbola eny am-bavany ihany, saingy « am-bava fa ratsy » na « am-bava ratsy ». Tsy ilay vava manonona azy akory no ratsy fa ilay teny mihitsy, angamba, ny mety ho ratsy matoa efa mananontanona ny 47%-n’ny teny aloakan’ny vavan’ny Malagasy iray monina an-drenivohitra, mifangaroharo teny vahiny, raha 23% izany any ambanivohitra. Izany hoe, raha manonona fehezanteny iray ny Malagasy eto an-dRenivohitra, tsy maintsy ahahenoana teny vahiny mifanaretsaka any anatiny any. Marihina fa tsy ilay anaran-javatra amin’ny teny vahiny akory io tafiditra any anatin’ny 47% io fa ilay fanehoan-kevitra (fanazavana) mihitsy.
Misy mpahay momba ny fivoaran’ny fiarahamonina milaza fa « afaka 50 taona eo ho eo, tsy hisy intsony izany teny malagasy izany fa ho teny mifangaroharo be ihany no hifanaretsaka eny anivon’ny fiarahamonina malagasy ». Ny hafa indray miteny fa: « tsy ho foana ao anatin’ny 50 taona akory ny teny malagasy fa tsy hisy hiteny intsony, eny fa na ny Malagasy tompony aza ». Filazana toa mitovitovy ihany satria samy te hilaza fa tandindomin-doza ny teny malagasy, atsy ho atsy. Tsy lavitra ny 50 taona ho avy. Hatreto, mbola tsy rototra ny sasany. Ny hafa indray, manezaka ihany fa tsy mbola ampy hery.
Na inona lazaina, na inona ambara, diso lalana tanteraka ny tontolon’ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy ny fampianarana any an-tsekoly ihany fa rehefa mety ho fanabeazana, tsy afa-bela amin’ny famotehana ny teny malagasy avokoa. Aiza ve ka Malagasy ray, Malagasy reny izao no miresaka amin-janany ka teny vahiny no ampiasaina. Aiza ve ka fivoriana ifanaovan’ny samy Malagasy ka teny vahiny no ifampiresahana, sns.
Raha tiana ho tafarina ny teny malagasy ka ho tian’ny Malagasy indray, tsy hisaraka amin’ny Malagasy mandrakizay, io fanabeazana io mihitsy no mila amboarina. Mila toe-tsaina vaovao rehefa mety ho mpanabe rehetra ka resy lahatra hanary ilay lomorina ao anatiny!